Kimograficheskaya perturbation - ndlela?
amashubhu Fallopian ukudlala indima ebalulekile ukukhulelwa wengane ngokushesha nje nge-ovulation esibelethweni ingena kahle lapho kwenziwa inqubo sokukhulelwa. Khona-ke zygote (oocyte avundiswa) uthuthela kwesibeletho, lapho linamathele mucosa. Njengoba ubona, ngaphandle fallopian amashubhu alikwazi ukuba owesifazane ebamba evamile. Uma ayaphuka noma kukhona inqubo engu- ukuvuvukala, i-zygote ngeke ungene kwesibeletho futhi kwesisu tube amaningi (ukhulela ethunjini).
Kuyingozi kakhulu ekuphileni futhi impilo yowesifazane. Ukuze ugweme lezi imiphumela zidinga ngokucophelela zikahulumeni uphethwe. Liphenye ngomsebenzi ohlongozwayo perturbation amapayipi - kuyinto yokumelapha lapho udokotela yethula carbon dioxide noma umoya ngaphakathi amashubhu fallopian, kwesibeletho kanye ingaphakathi peritoneal ukunquma isimo sabo sokusebenza.
Kubonisa ukuthi abesifazane uxilongwe "ukungazali". Futhi, ezinqunyiwe abantu abaletha alulame adnexitis noma salpingo, kanye iziguli iziyaluyalu endocrine. Isigaba sesithathu iziguli - labo kakade kwadingeka ukukhula komntwana ethunjini. Ngezinye izikhathi le ndlela kuhlangene nezinye izinqubo zokwelapha kanye kusebenta kwahulumende: laparoscopy, hysterosalpingography, futhi ngemva kokuba kakade perturbation. Kubalulekile ucwaningo ngaphezulu ulwazi futhi kunembile.
Igalelo amapayipi eyenziwa ngokushesha ngemva kokuya esikhathini (ngaphambi nge-ovulation). Ngaphambi inqubo, udokotela uqhuba luhlolo ngempela bimanual wesibeletho kanye sangasese, kanye ukhiqiza ukuhlolwa smear. Ngesikhathi uphethwe isiguli akufanele behlushwa yizifo ukuvuvukala.
Kimograficheskaya perturbation - maloboleznennaya le nqubo ukwenziwa esigulini esingalalisiwe esibhedlela. Nakuba le ndlela akudingi nokuphathwa umuthi wezinhlungu futhi umjovo. Okokuqala, udokotela kwenza magciwane emomozini kanye nezitho zangasese, bese wethula speculum nokusebenzisa ichashazi esebenzisa udalula wesibeletho.
I ingaphakathi lesizalo bephushelwa iraba tube ngobumnene obukhethekile ithiphu, bese bavunyelwe carbon dioxide noma emoyeni. Lapho isisu uqhutshwa irekhodi kimograficheskaya ohlelweni. Perturbation kuzo ngemibhobho fallopian akusho kuthathe imizuzu engaphezu kuka 5-7. Ngemva Ukuvalwa yayo kukhompyutha sinquma idatha kanye Imiphumela umphumela wokugcina umsebenzi obusebenzayo izitho zangaphakathi.
Uma isimiso sitholakale noma kahle peristalsis igemfe, udokotela esabela izindlela ezengeziwe of luhlolo kanye therapy ezifanele. Perturbation - kuyinto inqubo ebalulekile yokwenza ukuhlola kokuphumelela zomama. It is hhayi kwenziwe pathologies ka esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, njengoba esigabeni acute lesi sifo ukuphululwa kwezitho zobulili sofuba kanye.
Izimpawu ejwayelekile yengculaza amadoda
Prolactin (hormone): Kuyini lokhu? Norma prolactin kwabesifazane
Forum Health: iyini inzuzo
Kuyini sitholakele MRI? The kungenzeka MRI ukuhlola. Ukuxilongwa Brain MRI. Uphenyo MRI uphethwe
Ukunakekelwa okuthuthukisa ngoba abathile abanomdlavuza
Uma umuntu wokushiswa e ilanga, yini okufanele uyenze?
Ukusetshenziswa imbewu yefilakisi imithi
Indlela ukukhetha isikela futhi uzisole ngalokho ayekwenzile
Indlela ukugcina "Protargolum" ngemva ukuvulwa
Trustee - ubani lo? Amalungelo nemisebenzi ye-trustee. Ngubani kungaba umnakekeli?
Uyini umnyombo walokho ukwakha ngohlaka lwensimbi?
I-Whitening iqoqa i-Crest 3D White: ukubuyekezwa. Amazinyo amhlophe: kusho, amanani, ukubuyekezwa